Ama-Treehouses amabili athandekayo emvelo, e-Amsterdam - I-Airbnb
Ama-Treehouses amabili athandekayo emvelo, e-Amsterdam
Nigtevecht, Utrecht, i-Netherlands
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Mirjam
Thatha ikhefu ekuphithizeleni, ungaxhumani ngqo nabanye. Ukuvuka phakathi nemvelo, ngombono phezu kwezimfunda ezikhanyiswa ilanga: lokho kungenzeka lapha, ku-Vecht. Indawo yokuhlala inezindlu ezimbili zezihlahla, ngayinye inombhede ophindwe kabili othokomele. Izindlu zezihlahla kanye nobhavu oshisayo zivikelekile futhi zinikeza imibono phezu kwezimfunda. Ethaleni uzothola ikhishi lengilazi, isidlo sasekuseni esimnandi nekhofi. Ikhabethe leshawa nezindlu zangasese ezimbili ziqedela isithombe
Ukuhlala kwangaphandle okunethezekile phakathi nemvelo. Nakho konke okudingayo ukuze uthole ukunethezeka okujabulisayo. Ubhavu oshisayo nesitofu kubaswa izinkuni. Uthola ibhala lokuqala mahhala lapho ufika, ngaphezu kwalokho, sithengisa izinkuni ngama-€25 ibhala ngalinye. Udinga lonke ibhala lezinkuni ukushisisa ubhavu oshisayo.
4.59 out of 5 stars from 158 reviews
4.59 · 158 okushiwo abanye
Kuyindawo ekhethekile phakathi nemvelo endaweni yokulwa lapho ungakhululeka khona. Kule ndawo kukhona amadolobhana amancane, lapho unezitolo ezinhle futhi ungadla. Kodwa kuyimizuzu engama-30 ukusuka e-Amsterdam.
Uma kukhona imibuzo noma ukungaqondakali, sicela usazise.